Analytics amin'ny Clicky Web
Alahady 15 aprily 2007 Alahady 15 aprily 2007 Douglas Karr
Ireo olona ao amin'ny Sellsius dia manolotra Clicky amin'ny maha tranonkala hafa Analytics fonosana. Mampiasa Google Analytics aho amin'izao fotoana izao ary mahafinaritra izany - saingy mbola somary sarotra ihany ny mandehandeha ary mandoto ireo angona ilainao. Ny pikantsary ho an'ny Clicky mijery mahafinaritra, tsy andriko ny handavaka.
Ity mety ho fonosana izay atolotro ho an'ny mpanjifako rehetra - maimaim-poana ny misoratra anarana. Azonao atao ny manatsara ny endrika matihanina amin'ny $ 2 isam-bolana!
Famantarana 25 mety hanana olana amin'ny famahana bilaogy ianao
Manomeza valiny ireo mpitsidika anao amin'ny alàlan'ny fanamarinana endrika tena izy
Apr 15, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Izaho dia nampiasa an'ity rindranasa ity izay niorenany, antsoina hoe pmetrics. Mampalahelo fa tamin'ny andro lasa fotsiny dia nanjavona tampoka. Nanomboka nampiasa azy io aho rehefa leo ny fetran'ny google analytics, ity iray ity izay tsy nasiana ezaka firy tamin'ity google ity.
Hitako fa tsara ny safidin'ny pmetrika, saingy tsy nitaha tamin'ny google analytics izany, ny tarehiko dia ambany hatrany ary ny antsasaky ny fiasa tsy mandeha.
Ity tranokala ho an'ny Clicky ity dia mitovy tanteraka amin'ny pmetrics miaraka amina sora-baventy vaovao. Manantena aho fa ity serivisy ity dia namboarina ary mandeha tsara kokoa, dia andramako izany (amin'ny rohy referralinao :)). Manantena aho fa ny fisian'ity rindranasa ity dia loharano misokatra dia midika ho fisianà programa statistika mangatsiaka iray manontolo hanomboka hipoitra satria mbola misy toerana tsy maintsy anarahan'ny olona iray hanao fandaharana fifamoivoizana an-tranonkala.
Apr 15, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
Rehefa avy nampiasa azy nandritra ny ora vitsivitsy aho dia afaka manome toky fa tsy misy ny olana niainako tamin'ny pmetrics. Serivisy lehibe.
Apr 16, 2007 amin'ny 8: 14 AM
Wow, tabilao mahafinaritra, madio, mora vakiana izany. Mety hieritreritra ianao fa ny orinasa an'arivony tapitrisa dolara toa an'i Google dia afaka mahazo farafaharatsiny farafahakeliny tabilao izay toa tsara. Misaotra amin'ny tendrony!
Sep 19, 2007 amin'ny 6: 51 AM
Nijery an'i Clicky aho fa mbola mieritreritra ihany fa ny Google Analytics no tsara indrindra amin'ny fanombohana amin'ny web analytics. Raha hitanao fa mametra ny Google dia mety izao ny fotoana hanombohana mitady vahaolana karama toy ny ClickTracks na NetTracker hanome anao ny fahaizana mamaly fanontaniana.